ရိုနာဒို ကို အရန်ခုံ ထားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကြီးအကျယ် ငြင်းခုန်ခဲ့ကြတဲ့ ကာရေဂါ နဲ့ ရွိုင်ကိန်း - xyznews.co
ရိုနာဒို ကို အရန်ခုံ ထားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကြီးအကျယ် ငြင်းခုန်ခဲ့ကြတဲ့ ကာရေဂါ နဲ့ ရွိုင်ကိန်း
ဒေ့ဗ် ဂျုံး – “ ယူနိုက်တက် မန်နေဂျာသစ် အနေနဲ့ ရိုနာဒို နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လို အသုံးပြုသင့်လဲ?
ရွိုင်ကိန်း – “ ထည့် ကစားပေါ့”
ဒေ့ဗ် ဂျုံး – “ ပွဲထွက် ကစားသမား စာရင်းကနေ ပြောတာလား?”
ရွိုင်ကိန်း – “ဒီလိုပဲ ကစားခိုင်းရမှာလေ ၊ ရိုနာဒို ဆိုတာ အရန်ထိုင်ခုံးတန်း ကနေ လူစားဝင် ကစားပေးရမယ့် အတန်းစားမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီလိုသာ ဆိုရင် ခြေစွမ်းက အေးစက် သွားနိုင်ပါတယ်။ ရိုနာဒို ကိုယ်တိုင်လဲ ယူနိုင်တက် မှာ အရန်ခုံထိုင်ဖို့ အိုးထရက်ဖို့ဒ် ဆီ ပြန်လာခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။
ပွဲအပြီးမှာ ကာရစ် က ရိုနာဒို ကို ဘာဖြစ်ဖို့ Hight-Five လုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေတာလဲ နားမလည်ဘူးဗျာ။ အဝတ်လဲခန်း အတွင်းကို တန်းဝင်ခိုင်းလိုက်စမ်းပါ။ ရိုနာဒို ရဲ့ ပွဲအပြီး အပြုအမူ နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကစားသမားဘက်က ဘာမှ မမှားပါဘူး။ သူက အရန်ခုံ ထိုင်ဖို့ ပြန်လာတာ မဟုတ်ဘူးလေ ၊ အဲဒီတော့ ဘာအကြောင်းပြချက်ကြောင့်များ ထိုင်ခိုင်းတာလဲ။
သူက ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ ကစားသမား တစ်ယောက်ပါ။ ယူနိုက်တက် ကို ပြန်ရောက်လာခဲ့ချိန်က စလို့ သူ စွမ်းဆောင်ပြခဲ့တဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေ အားလုံးက OK ပါတယ်။ ဂိုးတွေ သွင်းတယ် ၊ ဂိုးဖန်တီးမှု တချို့လဲ လုပ်ပြထားနိုင်တယ်လေ။
အကြောင်းပြချက် ရှာချင်တာက ရိုနာဒို ကွင်းထဲမှာ လူကပ်ပြီး ခံစစ် ဆင်းကူ ကစားပေးရမှာလား? သူဟာ အဲဒီလို လူစားမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခါတလေမှာ အသင်းတစ်သင်း အနေနဲ့ ထိပ်တန်း ကစားသမား တစ်ဦးကို ဝန်းရံပြီး တည်ဆောက်ရတာမျိုး ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ တုန်းကလဲ အဲဒီလို ကစားပေးခဲ့ရတာပါပဲ။ ကန်တိုနာ ကို ဝန်းရံပေးထားတယ် ၊ သူဟာ ခံစစ်ကို မကူနိုင်ဘူး ဆိုရင်တောင် အရေးကြီးတဲ့ ပွဲတိုင်းမှာ ဂိုးတွေ သွင်းပြနေတာလေ။
ဒါကြောင့် ရိုနာဒို လဲ ပွဲထွက် ကစားသမား စာရင်းမှာ သေချာပေါက်ကို ထည့်ရမှာပါ။ သူ့ကို အနားပေးရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက ဘာမှန်းကို မသိပါဘူး။ ဗီလာ ရီးရဲ နဲ့ ကစားတဲ့ ပွဲမှာ ကစားသမား အများစု ပင်ပန်းတာမျိုးလဲ မရှိခဲ့သလို ၊ ကြာသပတေးနေ့ည အထိ ပွဲကစားစရာလဲ မလိုသေးဘူးလေ။ ဒါကြောင့် ဒီပွဲမှာ သူ့အနေနဲ့ အေးဆေးကို ပါဝင် ကစားပေးလို့ ရပါတယ်”
ဒေ့ဗ် ဂျုံး – “ ရန်နစ် ကရော အဲဒီ အတိုင်း မြင်ပါ့မလား”
ကာရေဂါ – “ မမြင်ပါဘူး။ ကျနော် ထင်တာတော့ ရန်နစ် ကလဲ အသင်းကို ရောက်ရောက်လာခြင်း ရိုနာဒို ကို အရန်ခုံ တန်းပိုပြီး ကိုယ့်ပြသနာ ကို မီးထွန်းရှာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ရိုနာဒို ကို ပွဲတိုင်း ထည့်ကစားရမယ် ၊ မီးနစ် 90 ပြည့် ကစားခွင့် ပေးရမယ် ဆိုတဲ့ အမြင်မျိုးက မှန်တယ်လို့ မထင်ပါဘူး။
ဒီလို အသင်းကြီး နဲ့ ကစားတဲ့ အဝေးကွင်း ပွဲစဉ်မျိုးမှာ မိုက်ကယ် ကာရစ်ဟာ ဘာကြောင့် သူ့ကို ပွဲထွက် ကစားသမား စာရင်းမှာ မသုံးလဲ ဆိုတာ ကျနော် က နားလည်ပါတယ်။
ဆွစ်ဇာလန်မှာ ကစားခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စု အစောပိုင်း ပွဲစဉ်တုန်းက ဆိုးရှား ကလဲ ရိုနာဒို ကို လူစားလဲခဲ့တာ မှတ်မိကြဦးမှာပါ။ ယူနိုက်တက် က တစ်ယောက် အနေအထားမှာ သူ့ကို ထုတ်ပြီး ၊ လင်ဂတ် ရဲ့ အမှားကြောင့် ရှုံးပွဲ ကြုံခဲ့တယ်လေ။ အဲဒီ အချိန်တုန်းကလဲ ရိုနာဒို ကို လူစားလဲတာ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆူဆူညံညံတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။
သူ့ အသက် က 36 နှစ် ရှိပါပြီ။ အဲဒီနောက် အဲဗာတန် နဲ့ ပွဲမှာ ပွဲထွက် ကစားသမား စာရင်းကနေ မပါရလို့ အဝတ်လဲခန်းထဲ တန်းဝင်သွားခဲ့သေးပါတယ်။
အခုချိန်မှာ ရိုနာဒို ဟာ အရင်က ရိုနာဒို မဟုတ်တော့ပါဘူး။ သွင်းဂိုးပိုင်း အနေနဲ့ ကြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ သူဟာ အသင်းအတွက် သွင်းပြနေဆဲပါ။ ဒါပေမယ့် သူ ပွဲထွက် ကစားသမား စာရင်းမှာ ပါမလာတာ ၊ လူစား လဲခံရတာမျိုးတွေ ကို အရေးကြီး ခွင်ကျယ် လုပ်ပြီး ပြောနေစရာ မလိုဘူး ထင်ပါတယ်။
ရွိုင်ကိန်း – “ ဂျေမီ……ငါပြောတာက ပွဲတိုင်း ထည့်ကစားရမယ်လို့ မဆိုလိုဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီပွဲဟာ (ချဲဆီး) ယူနိုက်တက် အတွက် အရေးပါတဲ့ ပွဲမျိုးလေ။ ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စုပွဲမျိုးမှာ ကိုယ့်အသင်း အခြေအနေ အရ လက်ခံနားလည်ပေးလို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ဖက်က ခံစစ်ကို ပြုံပိတ်ထားတဲ့ ပုံစံမျိုး ဆိုရင် သူ့လို ပုံစံမျိုးစုံ နဲ့ အလှည့်အပြောင်း လုပ်ပြနိုင်တဲ့ ကစားသမားမျိုးကို ထည့်ကို ထည့်ရမှာပါ။ သူကိုယ်တိုင်ကလဲ ဒါမျိုး ပွဲတွေမှာ ကစားခွင့် ရချင်မှာပဲလေ။
ကာရေဂါ – “ ဘောလုံး သမားတိုင်းက ဒီလိုပွဲမျိုးကို ကစားခွင့်ရချင်တာပါပဲ (သူတစ်ယောက်ထဲမှ မဟုတ်ပါဘူး)”
ရွိုင်ကိန်း – “ ဒါပေမယ့် တခြား ကစားသမားတွေ ဆိုတာက ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ ကစားသမားတွေ မဟုတ်ဘူးလေ။ သူတို့ ကစားသမားဘဝမှာ ကလပ်ပွဲပေါင်း 800 ကျော် ကစားပေးဖူးလို့လား။
ဒီနေ့ပွဲ ကြည့်လိုက်မယ် ဆိုရင် ယူနိုက်တက် ကစားပုံ က အားရစရာတော့ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူသာ ကွင်းထဲမှာ ရှိနေယ် ဆိုရင် သူ့ခြေထဲသာ ဘောလုံးရောက်သွားရင် တစ်ခုခုတော့ လုပ်ပြနိုင်စွမ်း ရှိနေသေးတယ် ဆိုပြီး ပရိသတ်တိုင်းက တွေးထားကြမှာပါ။ အသက် က 36 နှစ် ဖြစ်နေပါစေ ဦးတော့။
သူ့ ကစားပုံ က အမြန်နှုန်းမြင့် နဲ့ ကြောက်စရာ ကောင်းလောက်အောင် စွမ်းဆောင်ပြနိုင်တဲ့ အဆင့်မျိုး မဟုတ်တော့ရင်တောင် စိတ်ဝင်စားဖို့တော့ ကောင်းပါသေးတယ်။
သူက Pressing မ ကစားနိုင်တော့လို့ အပြစ် ပြောချင်တာလား?”
ကာရေဂါ – “Pressing ရော လုပ်ပြလို့လား”
ရွိုင်ကိန်း – “ သူက Pressing တော့ မလုပ်ပါဘူး။ ငါပြောတာ က သူ အိုးထရက်ဖို့ဒ် ကို ပြန်လာတာ ယူနိုက်တက် ရဲ့ ပြသနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ယူနိုက်တက် ကလဲ သူ့ ကို အရန်ခုံ ထိုင်ခုံမှာ ထိုင်ခိုင်းဖို့ ပြန်ခေါ်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးလေ။
ပွဲတိုင်းတော့ Line Up မှာ မပါနိုင်ဘူး ဆိုပေမယ့် ဒီပွဲက ချဲဆီး နဲ့ အဝေးကွင်း ပွဲစဉ် ဖြစ်လို့ တန်ပြန်တိုက်စစ် ကို ကစားကို ကစားရမှာပါ။ တစ်ပွဲလုံးမှ 18 ကိုက် အတွင်း အခွင့်အရေး 2-3 ကြိမ်ပဲ ရကောင်း ရနိုင်ပါတယ် ၊ ဒါပေမယ့် အဲဒီ အချိန်မျိုးမှာ ရိုနာဒို ကို ရှိနေစေချင်တာပေါ့။
ရွိုင်ကိန်း – “ဒီညမှာ ရပ်ရှ်ဖို့ဒ် ရော Pressing ကစားတယ် ထင်လို့လား?”
ကာရေဂါ – “ ယူနိုက်တက် က ဘာဖြစ်လို့ ရိုနာဒို ကို ခေါ်ခဲ့တာလဲ? မန်စီးတီး ကို ရောက်သွားမှာ အစိုးရိမ်တွေကြီးလွန်းပြီး ပြန်ခေါ်တာ မဟုတ်ပါဘူးလား။
သူတို့မှာ ရိုနာဒို ကို ခေါ်ယူဖို့ အစီအစဉ်က လုံး၀ ကို မရှိတာပါ။ နောက်ဆုံး မီးနစ် ရောက်မှ အိမ်နီးချင်း ပြိုင်ဘက်ဆီ ရောက်သွားမှာ စိုးလို့ ခေါ်ခဲ့တာပါ”
ရွိုင်ကိန်း – “ ဒါပေမယ့် သူက အမြဲတမ်း ကစားခွင့်ကို ရနေ ရမယ် ……ဂျေမီ။ ယူနိုက်တက် ဟာ ရိုနာဒို ကို မန်စီးတီး ဆီ မရောက်စေချင်လို့ ခေါ်လိုက်တာ မှန်တယ် ၊ ဒါပေမယ့် ငါတို့ အသင်းရဲ့ အရန်ခုံမှာ လာထိုင်နေကွာ ဆိုတဲ့ သဘောလား?
ကာရေဂါ – “ ငါက အဲဒီလို မပြောပါဘူး။ ငါ ဆိုလိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ရိုနာဒို ကို အရန်ထိုင်ခုံမှာ ထားခွင့်မရှိဘူးလားလို့ ထောက်ပြနေတာပါ။
ရွိုင်ကိန်း – “ ဟုတ်ပါဘီ ၊ ဒါဆိုရင် သူ စွမ်းဆောင်ပြတဲ့ ကိန်း ဂဏန်းတွေ ငါ့ကို ပြကြည့်လေ။ ယူနိုက်တက် ကို ပြန်လာ ကတည်းက သူ စွမ်းဆောင်ပြထားတဲ့ မှတ်တမ်းတွေက ကောင်းမွန်နေပြီးသားပါ”
ကာရေဂါ – “ ဂိုးသွင်းတဲ့ ရှုထောင့်ကနေ ဆိုရင်တော့ ဟုတ်ပါတယ် …… လက်ခံပါတယ်”
ရွိုင်ကိန်း – “ ဒါက ပွဲတစ်ပွဲ ရဲ့ အဓိက အစိတ်အပိုင်းပဲလေ။ ပွဲတွေ ဆိုတာ ဂိုးသွင်းဖို့ လိုတယ် မဟုတ်ဘူးလား”
ကာရေဂါ – “ဒါ ဆိုရင် ယူနိုက်တက် ဟာ ပရီးမိးယားလိဂ် အမှတ်ပေးဇယား ရဲ့ ဘယ်နေရာမှာ ရောက်နေတာလဲ? ချန်ပီယံ ဆု ကို စိန်ခေါ်ဖို့ နီးစပ်နေပြီလား? ရိုနာဒို ကို ခေါ်တယ် ဆိုရင် အဲဒီ ပေတံ နဲ့ ပြန်တိုင်းကြည့်သင့်တာပါ”
ရွိုင်ကိန်း – “ မင်းတို့ အီယန် ရှပ်ရှ် တုန်းကလဲ အဲဒီလိုပဲ မဟုတ်ဘူးလား”
ကာရေဂါ – “သူက အသင်းအတွက် လိုက် ကစားပေးတယ် ၊ ရိုနာဒို က Pressing မရှိဘူးနော်”
ရွိုင်ကိန်း – “ အီယန် ရှပ်ရှ် က အသင်းအတွက် လိုက်ပါ ကစားတယ် ဆိုပေမယ့် ၊ ရိုနာဒို လောက် ဂိုးသွင်းပြနိုင်ခဲ့လို့လား?
ကာရေဂါ – “ ငါက ရိုနာဒို ကို ကစားသမား တစ်ယောက် အနေနဲ့ ဝေဖန် ပြစ်တင်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ အသက် 36 နှစ် ရှိနေတဲ့ ဘောလုံးသမား တစ်ယောက်က ဘာတွေ အများကြီး လုပ်ပေးနိုင်တော့မှာလဲ။ သွင်းဂိုးတွေ နဲ့ ပတ်သက်လာရင် သူက ပြယုဂ် တစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် ငါပြောချင်တာ က ပီအက်စ်ဂျီ လဲ မက်ဆီ ကို ခေါ်ခဲ့တယ် ၊ ယူနိုက်တက် လဲ ရိုနာဒို ကို ပြန်ခေါ်ခဲ့တယ်။
သူတို့ နှစ်ယောက် လက်ရှိ မျိုးဆက် တစ်ခုလုံး ရဲ့ အကောင်းဆုံး ကစားသမား နှစ်ယောက်ပါ။ ဒါပေမယ့် ယူနိုက်တက် ဟာ ရိုနာဒို ရောက်လာလို့ မနှစ်က ရာသီထက် ပိုပြီး ပရီးမီးယားလိဂ် ဆွတ်ခူးဖို့ နီးစပ်သွားပြီလား? လုံး၀ ပါပဲ။ ထိုနည်းတူစွာ ပီအက်စ်ဂျီလဲ မက်ဆီ ကို ခေါ်ယူလိုက်လို့ ချန်ပီယံလိဂ် ဖလားကြီး နဲ့ နီးစပ်သွားပြီလို့ ပြောလို့ မရသေးပါဘူး။ ဘောလုံး ဆိုတာ အသင်းလိုက် ကစားတဲ့ ကစားနည်းမျိုးပါ”
ဒေ့ဗ် ဂျုံး – “ ဒါဆိုရင် ရိုနာဒို ကို ခေါ်ယူလိုက်တဲ့ မှားယွင်းတဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုလို့ မြင်ကြလား?”
ရွိုင်ကိန်း – “ ရိုနာဒို ဟာ ယူနိုက်တက် ကို ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလား ပြန်ရအောင်တော့ စွမ်းဆောင်ပြနိုင်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး”
ကာရေဂါ – “ ဒါဆိုရင် သူ့ကို ခေါ်ယူရတဲ့ အကြောင်းအရင်း က ဘာလဲ ၊ အသက်က 36 နှစ် ရောက်နေပြီနော်”
ရွိုင်ကိန်း – “ဆုဖလားတွေ ဆွတ်ခူးဖို့ပေါ့ ။ မင်းရော အက်ဖ်အေ ဖလား ရဖူးလား?”
ကာရေဂါ – “ရဖူးတယ်…”
ရွိုင်ကိန်း – “ သူ ပြန်လာတာ အက်ဖ်အေ ဖလား တို့ ၊ ချန်ပီယံလိဂ် ဖလားတို့ ကို စိန်ခေါ် ပြနိုင်ဖို့ အတွက်ပါ။ အခု ဆိုရင် ချန်ပီယံလိဂ် နောက်တဆင့် ကို တက်ရောက်သွားပြီလေ။ ဒါဟာ စီးပွားရေး ရှုထောင့်ကနေ ကြည့်မယ် ဆိုရင် ဘယ်လောက်အထိ သာသွားမယ် ထင်လဲ ။ ရှယ်တန် တန်းဖိုးတွေပေါ့။ ဒါတွေကြောင့် သူ့ကို ပြန်ခေါ်လိုက်တာပေါ့ကွာ။
ကာရေဂါ – “ မနှစ်က ဒုတိယ နေရာမှာ ရပ်တည်ထားတာနော်”
ရွိုင်ကိန်း – “ ဒုတိယ က မကောင်းဘူးလား။
ကာရေဂါ – “ ထားပါတော့ ။ မင်းတို့ အသင်းက 36 နှစ် ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ ကစားသမား ကို ခေါ်ထားတာနော်။ ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလားကို နောက်4နှစ် အတွင်းလဲ ရဦးမှာ မဟုတ်သေးဘူး။ ဆိုတော့ 36-37 နှစ် အရွယ် ကစားသမားကို ခေါ်ယူတယ် ၊ ချန်ပီယံလိဂ် ဖလား4လုံး ပိုင်ရှင် ဗာရန်း ကို ခေါ်ယူတယ် ဆိုတဲ့ လုပ်ရပ်မျိုးတွေဟာ ဒီရာသီမှာ ချက်ခြင်း အောင်မြင်မှုတွေ ရယူဖို့ အတွက် မဟုတ်ဘူးလား”
ရွိုင်ကိန်း – “ ရိုနာဒို ကို ခေါ်ယူခါစ တုန်းက အဲဒီလို ဖြစ်လာရမယ်လို့ ဘယ်သူက ပြောခဲ့လို့လဲ?
ကာရေဂါ – “ ဒါဆိုရင် နီးစပ်မှု ရှိနေပြီလား?
ရွိုင်ကိန်း – “ နီးလဲ မနီးပါဘူး ၊ သူကလဲ ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလား ရအောင် ယူပေးဖို့ ပြန်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကာရေဂါ – “ ဒါဆိုရင် ဘာတွေ ယူပေးမှာလဲ?”
ရွိုင်ကိန်း – “ ဆုဖလားတွေ ဆွတ်ခူးနိုင်အောင် ကူညီပေး ဖို့ပေါ့”
Previous Article ယာယီ နည်းပြ ကာရစ် ၊ ချဲလ်ဆီး နဲ့ သရေပွဲတွေအပေါ် မှတ်ချက်ပေးလိုက်တဲ့ ယူနိုက်တက်ရဲ့ MOTM
Next Article ဒီရာသီ အသင်းရဲ့ အကောင်းဆုံးလို့ ဆိုနိုင်အောင် ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ ဗီနီဆီယပ် ကို ချီးကျူးစကားဆိုလိုက်တဲ့ ရီးရဲ နည်းပြ အန်ဆယ်လော့တီ